Shiinaha Lip liner astaanta khaaska ah ee naxariis darada ah astaanta astaanta velvet kareemka bushimaha qalinka oem bushimaha xargaha qalinka warshad qalin iyo alaab Qurxinta Iris
Lip liner calaamadda naxariis darrada ah astaanta astaanta astaanta velvet kareemka bushimaha kareemka qalinka qalinka qalinka
Qiimaha EXW: 0.29 ~ 0.99 USD
Ku soo bixi baarkaaga garaac midabkiisu hodan yahay. Qadka qalinkeena Dibinta qalinka ayaa hada lagu heli karaa 65 midab - laga bilaabo buluug cagaaran oo buluug ah ilaa qoto dheer qaawan iyo casaan.
Waa xariir jilicsan oo jilicsan waxayna soo bandhigeysaa midab aad u sarreeya oo Matte ah. Saf bushimahaaga ama buuxi si aad u qeexdo oo u kobciso midabka bushimaha adiga oo isticmaalaya mid ka mid ah 65 ka mid ah midabada cajiibka ah.
Qalimaantayada Shaybaarka Liishka waxaa lagu afayn karaa makiinad af leh qalin u furan.
Magaca Shayga Xargaha bushimaha
Hore: faruur dhalaalaya iibiyaha calaamadda khafiifka ah ee bushimaha dhalaalaya dhalaaladiisa samee samee khadka tooska ah ee dhalaalaya bushimaha dhalaalaya dhalaalaya
Xiga: Matte bushinta calaamadda khaaska ah waxay ka samaysan tahay dhuumaha iibiyaha bushqeyaha calaamadda gaarka ah ee bushimaha maqaarka
bushimaha kareemka kareemka
Calaamadda Calaamadaha Dibnaha
bushimaha calaamadaha astaanta astaanta gaarka ah
qalin liner daaha
Qalin qalin liner
Calaamadaha Liishka Liisaska Gaarka ah
bushimaha liner calaamadda naxariisdarrada gaarka loo leeyahay
qalin liner qalin calaamad gaar ah
qalin qalin daaha
Liishka Calaamadaha Gaarka ah